Nepali Rajneeti | जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीको आविष्कार होइन, २००७ मै थियो
जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीको आविष्कार होइन, २००७ मै थियो
बैसाख १४, २०७८ मंगलबार ३८३ पटक हेरिएको
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उहाँ सच्चा इमानदार कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो । सरकारमा जान, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्‍न होइन, अविकसित सामाजिक संरचनालाई परिवर्तन गर्न उहाँ राजनीतिमा होमिनु भएको थियो ।
राष्ट्र बनेपछि मात्रै समाज बन्छ भन्‍नेमा भित्रैदेखि ‘कन्भिन्स्ड’ हुनुहुन्थ्यो । त्यसैका लागि जीवनभर लाग्‍नुभयो ।
नेपालमा जन्मिएर कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्‍ने पहिलो व्यक्ति हो, उहाँ । भारतको बनारसमा पढ्दाखेरि सन १९४५ तिरै उहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भइसक्नु भएको थियो । जुन बेला नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी खुलेकै थिएन ।
त्यतिबेलादेखि ज्यान जाने बेलासम्म कम्युनिस्ट पार्टी एउटा होस् भन्‍ने धारणा थियो । ‘कम्युनिस्ट पार्टी भयो भने मात्रै गरिब र असहायहरूका लागि लड्ने एउटा औजार हुन्छ’ भन्‍नुहुन्थ्यो ।
२००८ सालमा पहिलो महाधिवेशनबाट नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव बन्‍नुभयो । त्यसपछि बिरामी भएर चार वर्षजति चीनमै बस्नुपर्यो । त्यो बेला यहाँ केशरजंग रायमाझी कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव बन्‍नुभयो ।
२०१७ पुस १ को घटना भएपछि पार्टी फुट्यो । उहाँ र पुष्पलालले राजा महेन्द्रको त्यो कदमको विरोध गर्नुभयो । त्यो बेला उहाँ झण्डै नौ वर्ष जेलमा बस्नुपर्यो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र र उहाँ सँगै छुट्नु भएको थियो ।
कम्युनिस्टको सिद्धान्तले जे जसो भने पनि संसदीय व्यवस्थामा उहाँको विश्वास थियो । त्यसैले २००७ सालदेखि भएका कुनै पनि चुनावी कार्यक्रम बहिष्कार गर्नु भएन ।
चुनाव र संसदीय व्यवस्थाबाट नै जनताका समस्या समाधान गर्ने र नयाँ बाटोमा मुलुकलाई लैजान सकिन्छ भन्‍ने धारणा थियो । त्यही भएर बीपीले पनि भन्‍नुभएको छ, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको कांग्रेस सरह हो, पुरानै हो ।
२००७ सालमा पार्टी सानो थियो । २, ४ जना मानिस बसेर कुरा गर्ने र निर्णय गर्ने हुन्थ्यो । पार्टी ठूलो भएको छ, त्यससँगै समस्या पनि आएका छन् ।
यी समस्या भनेका हाम्रो सामाजिक अवस्थाका ‘रिफ्लेक्सन’ हुन् । सामन्ती विचार, व्यक्तिवादी सोचले समस्याहरू अहिलेमात्रै होइन धेरै पटक आए ।
कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा अगाडि जान समाजवादको बाटो तय गर्नुपर्छ । बाटो सशस्त्र क्रान्ति, हातहतियारबाट होइन, संसदीय प्रक्रियाबाटै जानुपर्छ भन्‍नुहुन्थ्यो । आखिर माओवादीले पनि १० वर्ष सशस्त्र युद्ध गरे पनि अन्तिममा संसद्मै आए ।
त्यो २००८ सालकै लाइन हो । झापाली केपी शर्मा ओली, सिपी मैनालीहरू पनि पहिला त उपद्रो गर्नै हिँड्या हुन् नि । उहाँ र पुष्पलाललाई त्यतिबेला ‘नेपाली कांग्रेसको पुच्छर’ भने । आखिरमा राजनीतिको लाइन त त्यही नै रैछ नि त । संसदीय व्यवस्थाप्रति उहाँ पूरा ‘प्रतिबद्ध’ हुनुहुन्थ्यो ।
पछि आएर एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा ल्यायो । त्यो २००७ सालमै थियो, नयाँ ल्याइएको होइन । मदन भण्डारीले आविष्कार गरेको चिज होइन ।
मदन भण्डारीले हा हा गरेका मात्रै हुन । पछि एमाले ठूलो र बलियो उहाँलाई नै अध्यक्ष बनाएपछि भएको हो ।
पार्टीको लाइन भनेको २००७ सालदेखि हालसम्म उहाँले नै बनाएको संसदीय व्यवस्थालाई मान्‍नुपर्छ भन्‍ने छ । संसद् छ, बहुमत छ, जनतामा जाने उपाय पनि त्यही हो । पछि एमालेले गरिरहेको त्यही हो ।
नेपालको विशेष परिस्थितिका कारण संसदीय व्यवस्था भन्दा अरु सोच्न हुन्‍न भन्‍नेमा उहाँ र पुष्पलाल ‘कन्भिन्स्ड’ हुनुहुन्थ्यो । त्यो विचारमा अहिलेका नेता पनि ‘कन्भिन्स्ड’ भएका छन् ।
तर, लोकतन्त्र चलाउने विषयमा अहिलेका नेता धेरै चुकेका छन् । २०४६ सालपछि पनि चुकेकै हुन् । संसद्लाई ठीकसँग चलाउन सकेनन् । त्यसमा हाम्रो पार्टी मात्रै होइन, कांग्रेस पनि उत्तिकै दोषी छ ।
त्यसकारण समाज अत्यन्तै अविकसित छ । नेताहरूको बुद्धि सानो छ । चित्त सानो छ । त्यसैले पनि समस्या छ । नेतृत्वमा व्यक्तिवादी, सामन्तीवादी सोचाइ छ । त्यो एमालेमा मात्र होइन, कांग्रेस र पूर्वपञ्चेहरूको नेतृत्वमा पनि देखिन्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा ‘ब्रोड’ भएर एउटा राजनीतिक लाइनका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्‍ने सोचाइ नै नेताहरूमा आएको देखिन्‍न । आशा गरौं, समयको कुरा हो विस्तारै हुँदै जान्छ होला । दिमाग लगाएर गर्न नसके पनि चेतेर गर्छन् कि ?
२०४६ सालमा चेतेका थिए, फेरि गडबड गरे । त्यति ठूलो गडबड त होइन । नेताहरूबीच को ‘सरदार’ बन्‍ने भन्‍ने झगडा देखिएको हो । सरदार त जनताले जसलाई पत्याउँछन्, त्यही बन्‍ने हो ।
जनताले माओवादीलाई पनि पत्याउन सके, एमालेहरू पनि हुन सके । पहिला केशरजंग रायमाझीसँग लागेर गएकाहरू पनि हुन सके । त्यसका लागि ‘नर्मल’ प्रक्रियाबाट जानु पर्यो, पार्टीको पद्धतिबाट होइन ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको भनेकै संसदीय व्यवस्थाबाट जाने कि पार्टी पद्धतिबाट जाने भन्‍नेमा हो । नीति, सिद्धान्त र त्यस अनुरूपको व्यवस्था बनाउन नसक्ने भएपछि जति टुक्रा भए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन ।
जतिसुकै लडे पनि चुनावमा भाग लिनै पर्छ । चुनावमा लड्न जाँदा बलियो पार्टी नभए हावा खाइहाल्छ ।
यतिखेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जतिसकै फूर्ति लगाए पनि अब दुई तिहाइ कसरी आउँछ ? दुई तिहाइ ल्याउने मानिस ‘डेमोक्रयाटिक’ हुनुपर्ने थियो ।
केपीजी डेमोक्रयाटिक हुनै सक्नु भएन । सरकार चलाउन त दुई तिहाइ चाहिन्‍न । विकास भन्‍ने चिज विस्तारै हुँदै जान्छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले राम्रो बजेट छुट्यायो भन्छन् । ल्याउने बेलामा त कुन सरकारले नराम्रो बजेट ल्याएको हुन्छ र ? कार्यान्वयन गर्यो कि गरेन भन्‍ने मुख्य कुरा हो ।
बजेट नै खर्च नभएपछि के को विकास हुन्छ ? बजेट गर्न सक्ने प्राविधिक क्षमता हामीसँग छैन । बजेट छुट्याउदैमा विकास हुन्छ भन्‍ने छैन ।
सरकारले बजेट छुट्याउने मात्रै हो । आफैँ कुदेर गएर बाटो पिच गर्ने त होइन नि । त्यसका लागि त प्राविधिक जनशक्ति हुनुपर्यो नि । रातारात यो गर्छु र उ गर्छु भनेर विकास सम्भव छैन ।
राजनीतिक रूपमा नेपाली कांग्रेस र हाम्रो पार्टी कसले विकास गर्दैन भनेको छ र ? कसैले पनि भनेको छैन । गर्नेले दुई चार पैसा खान खोज्छ । खाए पनि विकास गरेमा केही फरक पर्दैन । अहिले त खान पनि त्यति सजिलो छैन । विजयकुमार गच्छदार, खुमबहादुर खड्काले खान खोज्दा के भयो देखिएकै छ ।
२०१८ सालमा रायमाझीसँग छुटिएपछि पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन बनारसमा गर्नुभयो । त्यसबेलामा उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला नै उहाँले यसरी छुटिएर जान नहुने थियो भन्‍नुभएको हो ।
पार्टी ठूलो हुँदा केही बिग्रदैन । झगडा गर्ने वादविवाद गर्ने पार्टीभित्र बहसबाट नयाँ नीति र योजना निकाल्नुपर्छ, छुटिने होइन भन्‍ने धारणा उहाँको थियो । त्यो जीवनको उत्तरार्धसम्म पनि रहयो ।
त्यसबेलामा सोचाइमा फरक के थियो भने चीनमा माओसेतुङको दबदबा थियो । त्यसैको आधारमा नेपालमा पनि हातहतियार उठाएर सबै चिज बदल्न सकिन्छ भनेर मोहनविक्रमसहितका नेताहरू लाग्‍नुभयो ।
झापाली केपीहरू जंगलतिर लागे । पछि जनवाद ल्यायौं भने । तर त्यो जनवाद २००७ सालमा पनि होइन, लेनिनले नै ल्याएका हुन् । डेमोक्रेसीबाट सोसियालिज्म छुट्टिएर बस्‍न पर्दैन भन्‍ने लेनिनले भनेको कुरा हो । तसर्थ यहाँ ठूला ठूला आविष्कार गर्‍यौँ भन्दै पर्दैन ।
सोभियत संघको समाजवाद रातो भएर होइन, कालो भएर गएको हो । चीनमा अहिलेसम्म गएको छैन, त्यो त्यतिधेरै कालो नभएर अहिलेसम्म गएको छैन ।
जब जनताबाट नेता टाढा हुन्छन्, अनि भ्रष्टाचारमा डुब्छन् र पतनको बाटो तय गर्छ । त्यो हामीले विदेश र स्वदेशबाटै पनि सिक्नुपर्छ ।
लामो दुःख गरेर ल्याएको राजनीतिक व्यवस्था रातारात सकिनु भनेको अचम्मको कुरा हो । कम्युनिस्टहरूले वीपीले देखेको सपना, हामीले पनि देखेका भन्छन्, त्यो के देखेका हुन् उनीहरूलाई नै थाहा होला ?
तर, विकासको बाटो देख्‍ने सबैको सोचाइ एउटै हो । काम गर्ने तौर तरिका मात्रै फरक हुने हो ।
पुरानो पुस्ताका नेताहरू मनमोहन, बीपी, गणेशमान, पुष्पलाल र किसुनजीमा इमानदारी थियो । त्यो इमानदारी हराएको छ । मनबाट नेताहरू इमान्दार हुन सके भने पहिलाको ठाउँमा कुनै गाह्रो छैन ।
आफू ठीक ठाउँमा रहेर काम गर्ने हो । फल तत्काल ल्याउने गरी होइन दिगो गरी ल्याउन सोच्‍नुपर्छ । त्यो गुण उहाँमा थियो ।
संविधान त जसोतसो बनाइयो । त्यही संविधानअनुरूप मुलुक चलिरहेको छ । त्यसलाई कालो बनाउन हामी लाग्यौँ भने चाल रोकिन्छ । त्यही भएर कालो बन्‍ने प्रयास गर्नु भएन ।
उहाँ नेपालको प्रथम निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव हो । प्रथम निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हो । पहिलो पटक सरकारले पहिलो पटक उहाँको नाममा ‘मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय’ खोलेको छ । कुनै पनि जनताको छोरोको नाममा विश्वविद्यालय नेपालमा खुलेको छैन ।
(मनमोहन अधिकारीका छोरा प्रकाशसँग इकागजका मधुसुधन भट्टराईले गरेको कुराकानीमा आधारित)